Nokia: Smarthpones aseho ao amin'ny MWC 2018 | Androidsis
Eder Ferreño | | Finday, MWC, About us
2017 dia taona nahomby tokoa ho an'i Nokia. Ny orinasa dia niverina niverina an-tampon'ny mpanamboatra telefaona. Ka ity 2018 ity dia aseho ho fotoana manan-danja lehibe amin'ny marika. Nokia dia iray amin'ireo marika marobe hita ao amin'ny MWC 2018. Amin'ity hetsika ao Barcelona ity dia namela andian-dahatsoratra vaovao izy ireo.
Satria ny orinasa dia nanolotra ny sasany amin'ireo fitaovana vaovaony izay hamely ny tsena amin'ny taona 2018. Noho izany, raha mahaliana anao ny zavatra natolotry ny orinasa anay, aza misalasala manohy mamaky. Lazainay aminareo rehetra momba ireo vaovao ireo!
Namela fitaovana dimy vaovao ho antsika ity marika ity amin'ity hetsika fampisehoana ity. Telefaona dimy izay tadiavin'izy ireo handresy indray ny tsena toa ny tamin'ny taon-dasa. Efa fantatray ny pitsopitsony momba ny tsirairay amin'ireo finday Nokia dimy. Ka holazainay aminao bebe kokoa momba ny tsirairay avy.
Tamin'ny taon-dasa dia nahavita be ilay orinasa tamin'ny fanontana vaovao an'ny 3310 malaza. Fampivoarana vaovao an'ny iray amin'ireo telefaona malaza indrindra amin'ny marika. Amin'ity taona 2018 ity dia tadiavin'izy ireo ny mamerina izany amin'ny kinova vaovao amin'ny 8810. Io no mpikambana farany amin'ity telefaona mahazatra ity izay haverin'ity orinasa ity amin'ny tsena. ny manintona ny saina ny fitaovana miaraka amin'ny lokony mavo sy ny endriny somary miolaka.
Ireto ny fepetra manokana momba ny fitaovana:
Famaritana teknika Nokia 8810
efijery 2.4 Inch QVGA
processeur Qualcomm 205 Mobile Platform (MSM8905 Dual Core 1.1 GHz)
Tahiry anatiny 4 GB
Fakan-tsary aoriana 2 MP
Fakan-tsary aloha -
Fitaovana hafa Radio radio 3.5 mm an'ny radio FM
vidiny 79 euros
Amin'ny toerana faharoa dia ahitantsika an'ity kinova Nokia 6 ity izay naseho koa tamin'ny hetsika tao amin'ny MWC 2018. Telefaona afovoany natao haharitra ary izany dia hanome antsika fahombiazana tsara amin'ny fotoana rehetra. Ankoatr'izay, izany rehetra izany amin'ny vidiny izay tsy ratsy mihintsy. Noho izany dia afaka manampy be dia be ny marika eo amin'ny tsena. Ireo no pitsopitsony feno momba an'ity Nokia 6 vaovao ity:
Famaritana teknika Nokia 6
efijery 5.5 Inch IPS LCD Full HD miaraka amin'ny fiarovana Gorilla Glass
Tahiry anatiny 32GB / 64GB (Samy mivelatra hatramin'ny 128GB)
Fakan-tsary aoriana MP 16 miaraka amina f / 2.0 aperture
Fakan-tsary aloha MP 8 miaraka amina f / 2.0 aperture
Fitaovana hafa Sora-pikantsary sensor sensor akaiky ny NFC
lafiny X X 148.8 75.8 8.15 MG
vidiny 279 euros
Amin'ny laharana fahatelo dia ahitantsika ny Nokia 1. Telefaona iray izay fantatra amin'ny antsipiriany vitsivitsy tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Hatrany am-piandohana, ity telefaona ity dia nambara ho iray amin'ireo mora indrindra ao amin'ny katalaogin'ny marika. Ankehitriny, efa azontsika fantarina ny pitsony feno ary hitantsika fa izy io dia iray amin'ireo telefaona voalohany misy Android Go eny an-tsena Dia inona koa efa niomana ho antsika ve ity fitaovana ity?
Famaritana teknika Nokia 1
Operating System Android Go (Edisiona Oreo)
efijery 4.5 Inch IPS
processeur MediaTek MT6737 M Quad-core 1.1 GHz
Tahiry anatiny 8 GB
Fakan-tsary aoriana 5 MP misy LED Flash
Fitaovana hafa Audio jack 3.5 mm sensor akaiky an'i Radio FM
lafiny X X 133.6 67.7 9.5 MG
vidiny $ 89
Fahefatra, telefaona iray hafa izay nahafantarana angona sasany. Na izany aza, ny marina dia vitsy dia vitsy no fantatra hatramin'ny vao tsy ela akory izay. Soa ihany, efa afaka mahafantatra ny zava-drehetra momba ity Nokia 7 Plus ity isika. Finday iray izay ametrahan'ny marika marika amina endrika vaovao izay mampiavaka azy. Izay hitantsika alohan'ny iray amin'ireo sainam-bolan'ny orinasa vaovao amin'ity taona 2018 ity. Ireto ny masontsivana ao amin'ny Nokia 7 Plus:
Famaritana ara-teknika Nokia 7 Plus
modely 7 Plus
efijery 6-inch IPS LCD Full HD + miaraka amin'ny fiarovana Gorilla Glass
Tahiry anatiny 64GB (Azo avela hatramin'ny 256GB)
Fakan-tsary aoriana MP 12 miaraka amina f / 1.75 misy tselatra feo roa
Fakan-tsary aloha MP 13 miaraka amina f / 2.6 aperture
Fitaovana hafa NFC Fingerprint sensor 3.5 mm audio jack
bateria 3.800 mAh (miaraka amina fiampangana haingana)
lafiny X X 158.38 75.64 7.99 MG
Farany hitantsika ity fitaovana ity. Finday iray izay aingam-panahy avy amin'ny tantaran'ny marika. Manolotra endrika kanto sy tsy manam-potoana izy io, na dia hainy aza ny manaraka ny fironana amin'ny tsena miaraka amin'izay. Ity Nokia 8 Sirocco ity dia mampanantena fa ho iray amin'ireo sainam-pirenena vaovao marika. Ny orinasa mihitsy no mamaritra azy io ho ny tsara indrindra vitany hatreto. Ireto avy ireo antsipirihany feno:
Famaritana teknika Nokia 8 Sirocco
modely 8 Siroko
efijery 5.5 QHD miaraka amin'ny fiarovana Gorilla Glass 5
Fakan-tsary aoriana Double 12 + 13 MP miaraka amina apertures f / 1.75 sy f / 2.6 ary zoom optika
Fakan-tsary aloha 5 MP
Fitaovana hafa NFC sensor
bateria 3.260 mAh (miaraka amin'ny famahanana tsy misy tariby sy famaranana haingana)
lafiny X X 140.93 72.97 7.5 MG
Amin'ity tranga ity, samy hafa ny vidiny sy ny fisian'ny telefaona tsirairay. Noho izany, milaza aminao bebe kokoa momba ny tsirairay tsirairay eto ambany izahay. Mba hahamora kokoa anao hanana ny mombamomba ny telefaona izay mahaliana anao indrindra.
Ny Nokia 8810 dia ho hita amin'ny vidiny 79 euro. Hamely ny tsena izany manomboka amin'ny volana Mey.
Raha ny Nokia 6, ny fitaovana dia hamely ny tsena amin'ny loko telo samy hafa. Hanana iray amin'ny varahina mainty izahay, fotsy metaly fotsy ary volamena-manga iray. Ary koa, hisy ny kinova an-tariby roa mifototra amin'ny RAM sy fitahirizany. Ho tonga amin'ny volana aprily ny kinova misy RAM 3 GB sy tahiry 32 GB, raha ny iray kosa havoakany avy eo, na dia mbola tsy misy daty aza. Ny kinova voalohany dia hamely ny tsena amin'ny a vidiny 279 euro.
Ny Nokia 1 dia iray amin'ireo telefaona azon'ny mpampiasa vidiana ankehitriny. Efa misy manerantany izy io. Tonga eo amin'ny tsena amin'ny loko roa, mena mafana sy manga mainty. Ankoatr'izay, amin'ny tsena sasany dia misy tonony pastel ihany koa. Ny vidin'ny telefaona dia 89 $.
Eo amin'ny toerana fahefatra dia ny Nokia 7 Plus. Iray amin'ireo sainam-pirenena vaovao an'ny orinasa. Ny fitaovana dia havoaka amin'ny loko roa eny an-tsena (mainty sy fotsy) izay samy ampiarahina amin'ny famaranana varahina. Tonga ao amin'ny magazay mandritra ny volana aprily izy io ary hanao izany amin'ny vidiny 399 euro.
Ny fitaovana farany natolotr'ilay marika dia ny Nokia 8 Sirocco. Io no avo lenta farany an'ny orinasa, izay manana endrika tsara. Tonga hatrany amin'ny tsena ilay fitaovana fiandohan'ny volana aprily. Hanao izany a vidiny 749 euro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Jereo ny smartphone Nokia dimy naseho tao amin'ny MWC 2018
Ny ZTE Blade V9 dia efa ofisialy, fantaro amin'ny antsipiriany ny famaritana azy